राष्ट्रपति भण्डारीको सरकारलाई गगन थापाका ६ दमदार प्रश्न, सुनेर तिनछक परे ओली-प्रचण्ड — Sanchar Kendra
१सकियो नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक, ओली सरकारलाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
२कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप १६ जनाको मृत्यु
३पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहका विद्यार्थीको गोप्य भेला, के भयो निर्णय ?
४२४ घण्टामा थपिए १२७२ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति ?
५अंग्रेजी नयाँ बर्षलाई लक्षित गरि फेरि नयाँ लकडाउनको घोषणा, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ?
६मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक साढे तीन घण्टा बन्द गरिने
७कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै फेरि यी क्षेत्रहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा, के गर्न पाइन्छ/के पाइदैन ?
८ओलीको दूत बनेर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे ईश्वर पोखरेल, के लगे प्रस्ताव ?
९एकैसाथ किन कोरोना खोप लगाउँदैछन तीन अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति, यस्तो छ कारण
१०खेतमा काम गरिरहेका ४३ मजदुरको घाँ’टी रे’टेर ह’त्या
११उदयपुरमा शक्तिशाली ब’म वि’स्फोट, ४ जना घाइते, थप विवरणसहित
१२सीमा विवादबारे भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धनसँगको वार्तामा नेपालले राख्यो यस्तो प्रष्ट अडान, ओलीले के भने ?
राष्ट्रपति भण्डारीको सरकारलाई गगन थापाका ६ दमदार प्रश्न, सुनेर तिनछक परे ओली-प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलमल्एिको निबन्धजस्तो भएको बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो थप टिप्पणी नभएको भन्दै केही प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा उनले राष्ट्रपतिलाई तपाईंको सरकार भन्दै ६ वटा दमदार प्रश्न गरेका हुन् । यस्ता छन् थापाले राष्ट्रपतिलाई गरेका ६ प्रश्नहरु:
प्रश्न १ः यो वर्ष तपाईंको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संवैधानिक आयोगलाई गिजोल्यो । के यो वर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?
प्रश्न २ः चालु वर्षमा तपाईको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानुन बनाउने प्रयास ग¥यो । भएको कानुनको पनि दुरुपयोग ग¥यो । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?
प्रश्न ३ः राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न उक्सायो । राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउने काम ग¥यो । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?
प्रश्न ४ः संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति बनाउने पर्ने कार्यक्रम बनाए । आवश्यक कानून बनाएन, नियम बनाएन, कर्मचारी पठाएन । स्रोत र साधान मुठ्ठी कसेर राख्यो तर आदेश भनेर दियो । मुख्यमन्त्रीलाई अञ्चलाधीश जस्तो, स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो व्यवहार ग¥यो । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?
प्रश्न ५ः भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिनँ । हुन पनि दिन्न । भयो भने विद्या नस्ट भनेर कसम खायो । तर, एकसे एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरी पहिल्यै फैसला सुनाउनुभयो, यो दोषी यो निर्दोषी भनेर । के यो वर्ष पनि तपाईंको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ?
प्रश्न ६ः शासकीय क्षमता बढाउन गर्नुपर्ने संरचनागत प्रक्रियागत सुधारहरु केही पनि नगर्ने तर, चटकहरुबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईंको सरकारले गरेको यो वर्षको नीतिलाई आउँदो वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ?
कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘म महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको सरकारले सोध्न चाहन्छु ।’ यो प्रश्नको उत्तर नआउने बरु गाली आउँछ भन्नेमा आफू जानकार रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदलाई दिएको निर्देशन तथा विभिन्न मञ्चमा प्रयोग गरेको भाषा सुन्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नशहरुमा बौद्धिक छलफल हुन्छ भन्ने आश नरहेको उनले बताए ।
बरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटर प्याड प्रयोग गरेर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा योजनाहरु पार्न योजना आयोगलाई पठाएको पत्रको फेहरिस्त र नीति तथा कार्यक्रम हेरेपछि एउटै सुझाव दिन मन लागेको भन्दै उनले भने, ‘अब ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ होइन ‘समृद्ध दमक सुखी केपी ओली’ भन्ने नारा लगाओस् । सुखी हुन नपाउने हामीहरुको भने श्री पशुपतिनाथले कल्यण गरुन् ।’
गगन थापाका यी प्रश्न सुनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डसहित सत्तारुढ दलका नेताहरु तिनछक परेका छन् ।
यस्तै राजपाका सांसद महन्थ ठाकुरले पहाड र तराईबीच अझै पनि विभेद कम नभएको भन्दै संसदमा गुनासो गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद ठाकुरले अहिले पनि मधेशी र पहाडीको लागि फरक कानून भएको भन्दै काठमाडौंले पहाडीलाई मात्रै नेपाली मान्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
अहिले नागरिकताको सवालमा भारतीयले नागरिकता लियो भनेर दिनेगरिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमाथि खण्डन गर्दै नेता ठाकुरले अहिलेपनि मधेशमा जन्मिएकाहरुलाई नेपाली भन्न कसैले पनि नचाहने गरेको आरोप लगाए ।
‘तपाईहरु पहाडमा जन्मिएकोलाई मात्रै नेपाली देख्नुहुन्छ । हामी मधेशमा जन्मिएकाहरु मधेशी देख्नुहुन्छ । हामी आफ्नै भूमिमा विदेशी भएजस्तो व्यवहार सहन बाध्य छौं ।’ संसदमा बोल्दै उनले भने ‘हामी पनि पहाडमा जन्मिएको भए नेपाली भन्ने सौभाग्य पाउँथ्यौं होला । तर, विडम्बना मधेशमा जन्मिएर त्यो सौभाग्य पाएनौं ।’
भारतीले नागरिकता लिएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने लाईनमा भारतीय बसेको भएपनि नागरिकता दिने ठाउँमा गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु बस्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे ‘के गृहमन्त्रालयमा पनि भारतीयहरु बसेका छन् ?’
फरक प्रसंगमा उनले जनताले जिताएको चेहरा संसदमा बस्न नपाउनु जनताको अपमान हो भन्दै अदालत र दुनियाँ अड्डाको नाममा लोकतन्त्रको लागि लडेको मानिसले अहिले अधिकार माग्दा गोली खानु परेको छ र जेल बस्नु परेको गुनासो गरे ।
उनले दिन खोजेको संकेत सर्वाेच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाईएका रेशम चौधरी तर्फ थियो । उनले सोधे ‘के यही लोकतन्त्रको लागि हामीले लडेको हो ?’ उनले कागजमा लोकतन्त्रका राम्रा राम्रा नाराहरु कोरिएको भन्दै व्यवहारमा भने केही पनि नदेखिएको बताए ।
यस्तै बैठकमा बोल्दै बालुवाटार प्रकरणमा आलोचित बनेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले दोषी ठहर भए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको भन्ने प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
संसदमा बोल्दै उनले भने ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो र केही पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरुको नाम जोडिएको प्रति मेरो आपत्ति छ । यसको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’ उनले सत्यतथ्य छानविन गर्नको लागि सरकारले चालेको कदमलाई हार्दिकताका साथ स्वागत समेत गरेका छन् ।
म आफू दोषी ठहर भएमा जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर यसमा सरकारले यथासक्य चाँडो सत्य तथ्य छानविन गरेर दोषी माथि कारबाही गरोस् ।’ पौडेलले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले किन भनिन् ‘मेरो सरकार ?’ यसो भन्छन् प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामन्ती चिन्तन भएकाहरुले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भन्ने आएकोमा विरोध गरेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको सर्वोच्च निकाय भएकाले राष्ट्रपतिले जननिर्वाचित सरकारलाई अपनत्व दिन पनि ‘मेरो सरकार’ भन्ने गरेको तर्क पनि गरे ।
गत बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्नु भएकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई भारतीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनसँग समेत तुलना गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भनिएकोमा विरोध गर्नेहरुले भारतीय राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्ने गरेको हेर्न पनि पटक–पटक आग्रह गरे । उनले भने, ‘जननिर्वाचित सरकारलाई राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर अपनत्व दिन्छ । स्वीर्काछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘मेलै मेरो देश भन्छु तर तपाईहरुको देश होइन् भनेको होइन । मेरो राष्ट्र, मेरो भाषा, मेरो संस्कृति भनेर मैले निजी भनेको हो र ? मैले त राष्ट्रिय सामूहिक भाषाको सर्वोच्च अभिव्यक्ति मात्रै दिएको हो । ’
सोमबार सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसबाट निर्वाचित भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई पनि पटक–पटक मेरो सरकार भन्ने गरेको दृष्टान्त पनि पेश गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सर्वोच्च पद भएकाले सेना परिचालन गर्ने, संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणित गर्ने काम गर्ने गरेको पनि स्मरण गराए ।
सकियो नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक, ओली सरकारलाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएका बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहका विद्यार्थीको गोप्य भेला, के भयो निर्णय ?
ओलीको दूत बनेर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे ईश्वर पोखरेल, के लगे प्रस्ताव ?
ओलीले एउटा पद नछाेडेसम्म पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुँदैन- देवेन्द्र पौडेल
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, पौडेलको गिरफ्तारीबारे छलफल हुने
ओली-प्रचण्ड फुट्ने निश्चत बनेपछि विद्या भण्डारीले चालिन यस्ताे कदम, नेकपाभित्र तरंग
पौडेल गिरफ्तार परेकै ठाँउमा पुगेर कांग्रेस नेताहरूले भने- स्थानीय प्रशासन र प्रहरी कठपुतली बने
सुविधा र अवसरमा फरक क्षमता भएकाहरुको समान पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ- राष्ट्रपति